I-Dubai 7 inkanyezi Ihhotela 🏩 Burj Al Arab Jumeirah - Umhlahlandlela e-UAE
Ihhotela lasehhotela lase-Dubai 7
Ungayisebenzisa kanjani isimemo soMema?
Kungani wakhe ibhizinisi lakho e-Dubai?
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at February 18, 2019
Imininingwane ethintekayo nesiqondisi mayelana ne-7 Star Hotel ku- Dubai. Inkampani yethu izama ukubeka ama-positives futhi ikusize uthathe isinqumo. Noma yini ongathanda ukuyivakashela Ihhotela lethu elihle kakhulu eDubai. Ngiyethemba wenza, usinike ithuba futhi sikukhuthaze kancane ukuthi kungani iHhotela lethu lihamba phambili emhlabeni.
I-Dubai 7 Star Hotel: Umhlahlandlela ophelele onemininingwane enemininingwane. Yenziwe yiNeowise.org - Umhlahlandlela Wenkampani yaseDubai City wabangaphandle nabasebenzisi bendawo.
Kunezinto eziningi okufanele uzazi nge-The World's Exclusive Hotel ngaphakathi Dubai City. Ungahlala ubuke ngezansi kwi-tweet evela kuJumeirah futhi ubone ukuthi yini ku-Dubai!.
Kuningi kakhulu izinganekwane nezindaba ezingenakhulunywa ngale ndawo emangalisayo. IBurj Al Arab iyona evamile ukukhuluma eDubai yihhotela elakhiwe ngesikebhe.
Lokhu indawo isenhliziyweni ka Isikhungo sebhizinisi sase-Arabia Arabia.
Leli hhotela elikhudlwana elikhulu liba yihhotela lesihlanu ngobude emhlabeni futhi ingxenye yamahhotela aphezulu aseJumeirah eSifundeni SaseGulf. Ngakho-ke, IDubai isuselwa kunethezeka lwamazwe omhlaba ihhotela chain, iJumeirah yenza uphawu lwayo njengenhlangano ephezulu yokungenisa izihambi.
Yebo, ukukhuluma okuningi, kunamahhotela amaningi eDubai. Noma kunjalo, kukhona eyodwa kuphela enesilinganiso se-7 Stars. Ngokushesha ube super zikanokusho futhi ikakhulukazi izivakashi VIP. Impela ingaphezu kwendawo kanokusho eDubai.
Ukuba nesilinganiso sezinkanyezi ze-7?
Burj Al Arab iyindlela eya thola i-VIP ukwelashwa ehhotela
Inkampani yethu izokuzama ukukuchazela kancane ukuthi kungani iBurj Al Arab ifanelwe zonke izilinganiso zezinkanyezi ze-7 nokuningi ...
Siyayithanda ihhotela lezinkanyezi laseDubai 7 - iBurj Al Arab Jumeirah, eDubai
I-Burj Al-Jumeirah, e-Dubai
Noma ngabe yini oyithandayo, leli hotele libheke phambili ukuhlinzeka ngamasevisi okuphupha!
No.1 Ithimba Eliphethe Elizinikezele
Zabo CEO unolwazi olungaphezu kweminyaka engu-30 embonini yamahhotela. Futhi lokho kukunikeza i-hotelier emangalisayo ithimba labaphathi elinolwazi. Zonke empeleni zizinikele kakhulu ekuhlinzekeni isipiliyoni sensiza yamakhasimende esengeziwe kubavakashi babo. Futhi ngokujwayelekile, uzoba nokuthile ongakufisa cishe ezinsukwini ezingu-3 !. Ngaphakathi okungokoqobo, konke okudingeka ukwenze nje ukucela abaphathi beBurj Al Arab futhi ngokuqinisekile kuzokwenziwa !.
Ibhodi lokuphatha e-7 Star Hotel
No.2 I-Excellence Dining Experience e-Dubai
Kukhona izindawo zokudlela ze-11 ehotela elilodwa!
Ubheka futhi gastronomic inkosi style style?. Le ndawo yokudlela yaseDubai inikeza lezo zinsizakalo !. Hhayi kuphela ongabheka izinto zomhlaba wonke ezivela kuwo wonke umhlaba. Unga-oda ngokubhaliwe noma yikuphi ukudla okuthandayo ezindaweni zokudlela eziwina umklomelo kaBurj Al Arab Jumeirah eDubai. Yebo, kusho ukuthi noma yikuphi ukudla kuzolethwa kuwe ngokuqinisekiswa okusha !. Lokhu nje wow !.
Ihhotela linikeza ukudla okumangazayo okuningi, okuvela kusi-Arabic I-Pakistani futhi AmaNdiya cuisine kuze kube kude-empumalanga Asia kanye zanamuhla European izitsha.
Kusukela ufika esikhumulweni sezindiza i-Dubai, umshayeli uzokuhambisa ehhotela. Ngemuva kwalokho ungavakashela indawo yokudlela bese uthola inhlanganisela ethokozisayo yezinambithelo ezinhle kakhulu ezenziwe ngumuntu emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, uyakwazi ukucela ukwenza ubuciko bokucamba bokucamba obukhuluma ngokujwayelekile abenzelwe bona uqobo. Ngakho-ke, ngaphesheya kwe-Burj Al Arab indawo yesiginesha kanye nemigoqo.
Ithi indaba yeqiniso leli hotele linalo ukuhlukanisa ngokweqile kokunethezeka. Ngokweqiniso, konke okufanele ukwenze nje ukwenza isamba semali esihle. Ngemuva kwalokho uzoqala indatshana yokuphila impilo ehhotela elibukhazikhazi emhlabeni, iBurj Al Arab.
Abapheki basekhishini laseJumeirah bakha amava okudlela angalibaleki ongasetshenziswa kwizinyathelo zakho zasekamelweni lakho. Futhi lokho kuhlala isikhashana emva kokudla sekuphelile. Vele ngoba yindawo yabo.
Isithombe sangempela sokudlela
No.3 Ukuhamba kahle ne-Spa e Dubai
Izwe lokunethezeka e-United Arab Emirates. Lokhu kuhle kanye ne-spa kwenziwa ngamamitha we-150 ngaphezulu kwe-Arabian Gulf.
The I-Burj Al Arab Spa yiyona yokunethezeka ekugcineni e-Emirates. Iningi labantu elihambele le ndawo emangalisayo libheka ukuthola ukunethezeka, ukuphumula nokuhlaziya kabusha isipiliyoni.
Kodwa-ke, okuhlangenwe nakho ngakunye okulethwa kumakhasimende kuye kwaklanywa ngokucophelela futhi kwahlolwa kabili ngomphathi bese kuba ngabaphathi.
Ngakolunye uhlangothi, lezi zinsizakalo zenzelwe kuphela amakhasimende acebile. Ngenkathi mhlawumbe usebenzisa imikhiqizo nezinsizakalo ezinhle kakhulu emhlabeni kusuka emashalofini aphezulu emakethe yokunethezeka yaseDubai. Futhi uyakwazi ukushiya iDubai usesimweni sokuphumula kwengqondo.
I-Spa iyamangalisa kule ndawo!
No.4 Imihlangano ye-Burj Al-Arab Yebhizinisi nezinkomfa
Abahambi futhi izivakashi ezingadli nokulala eDubai kuphela. Izindawo ezinjengehhotela lezinkanyezi le-7 eDubai ezinikezela okuningi:
Izindawo - Leso isiphakamiso somkhiqizo sikaJumeirah sikaLuxury. Kukhona nesilingo salokho, asikho nesisodwa sezehlakalo eBurj Al Arab Jumeirah esakhelwe okufanayo. Indawo ngayinye yendawo iguqulwa ngezidingo zamakhasimende.
Isidlo sangasese Isevisi exhaswe ngu ubuqotho bokungenisa izihambi zase-Arabhiya. Kusetshenziswa kakhulu yizinkanyezi zaseHollywood futhi ibhizinisi abanikazi. Kodwa-ke, i-cuisine ewina umklomelo nezinto ezisezingeni eliphakeme zokwenza yonke indawo ukudla kwasemini ithuba lokukhumbula noma ukwenza isivumelwano esibalulekile esivaliwe endaweni enenani eliphakeme.
Weddings eDubai, le yingxenye yothando nobuhle. Iphethwe kahle futhi ukubuka okumangazayo kwe-Arabian Gulf. Usuku lwakho lomshado luzoba ngolunye oluhle emndenini wakho.
Imihlangano Business - I-Dubai 7 Star Hotel ine kuningi ongakunikela.
Imithwalo emikhulu ye-VIP nezikhala ezimangazayo zilungele izingqungquthela zebhizinisi langasese. Ngaphezu kwalokho, Abaphathi abaphezulu bezinkampani abasebenzisa le nzuzo yehhotela yezingqungquthela ezintsha kanye nosizi lwebhizinisi.
Izenzakalo - Ziyizinsizakalo ezisemqoka ehhotela le-Dubai 7 Star. Izindawo ezimangalisayo zomcimbi wezizwe ezenziwe ngesicelo. Kuningi okungcono kakhulu emihlanganweni yangasese yangasese.
Vakashela ihhotela le-7 Star e-Dubai
No.5 Ibhonasi ye-Burj Al Arab kanye nezinzuzo
Yebo, le ngenye insizakalo abayinikelayo. Qala ukuqoqa iphuzu leBlue, iSiliva noma leGolide ekhadini lakho elikhethekile. Ukwenza lokho kujabulise kumele ufake isicelo ukuze ube yilungu leJumeirah Sirius.
Uhlelo lumangalisa ngempela. Simply lapho uqala ukuqoqa Amaphuzu amabili weJumeirah Sirius. Bese ngikhuluma nje, ngayo yonke i-USD 1 oyisebenzisa ehhotela, indawo yokudlela, i-spas. Uzophinde futhi uqanjwe kabusha ukufinyelela kwangasese kwamalungelo akhethekile eDubai I-7 Star Hotel kwezinye zezindawo ezinhle kunazo zonke emhlabeni emhlabeni!
Bheka izinzuzo nge Ubulungu be-Sirius. Ithemba uzoyithola lapho ufika lapho.
Vakashela i-Burj Al Arab
No.6 I-Burj Al Arab Development
Sonke siyazi ukuthi le nkampani ikhula ngendlela eyiyo. Iqembu leJumeirah linempahla eningi. Isibonelo Ukwenza i-Living Marina Gate, Dubai, United Arab Emirates. Bahlela ukukhulisa umgoqo weJumeirah Muscat Bay kanye ne-Oman Jumeirah Atakoy Hotels & Residences.
Le nkampani ibuye iveze uhlelo lwe-Istanbul, eTurkey lokuthi kuzokwakhiwa ihotela elisha eminyakeni embalwa ezayo. Ngemuva kwalokho uJabal Omar Jumeirah Makkah. Futhi, uMbuso waseSaudi Arabia amaphrojekthi ambalwa asendleleni yokuthuthuka.
Inkampani efudukela eNyakatho Afrika!
No.7 Izinzuzo Zokusebenzisana Ibhizinisi
UJumeirah usayine neminye imikhiqizo edume kakhulu emhlabeni jikelele. Izinkampani eziningi ezimakethe yaseMiddle East zingathanda ukuba nokuxhumana nalesi sihhotela sezinkanyezi iDubai 7.
Leli Hhotela, likhuluma ngokujwayelekile, libheke ukunikeza futhi izivakashi zabo amathuba ahlukahlukene ebhizinisi. Ngakho-ke, jkufanele wenze isivakashi ngasinye happy futhi wenze ukuhlala kwabo noma uvakashele okukhumbulekayo.
Abaphathi nabaqondisi ekudleni kwasemini kwehhotela iziphakamiso eziningi eziphakeme, Isibonelo, izinhlelo zezindiza ze-Flyer. Lokhu kunika amandla izivakashi zaleli Hhotela ukuthola imali ngamamayela kuyo yonke indawo yokuhlala, futhi kusizakale nokunikezwa okukhethekile.
Kuningi kakhulu Izinkampani ze-Airlanes ongaba nesaphulelo. Isibonelo i-Emirates, Etihad Airways, Japan Airlines nezinye eziningi.
IJumeirah Ihhotela linobudlelwano obunezithelo nezinye izinhlangano eziningi ku I-United Arab Emirates. Basebenza ngokubambisana iphothifoliyo kubandakanya nezezimali kanye imikhiqizo yokunethezeka e-UAE.
No.8 Amathuba emisebenzi ehhotela le-7 Star
Lesi isigaba lapho abafundi bethu bezothakazelwa kakhulu. Vele ngoba sisiza ama-expats ukuthola umsebenzi eDubai. Ungafaka isicelo online se umsebenzi e Dubai Ihhotela le-7 Star. Isibonelo, ungabheka iJumeirah Restaurant Group noma iHhovisi Lenkampani eDubai. Kunezikhala eziningi ku Umkhakha wokungenisa izihambi eDubai ngisho nase-Abu Dhabi.
Yebo, ukusebenza ehhotela elihle kakhulu emhlabeni. Lokho kungaba yinto enzima ukuphatha. Kepha, uma sikhuluma, kunabafokazi abaningi e-United Arab Emirates. Kusuka kuwo wonke umhlaba. Ngakho-ke, ngeke ube wedwa.
Kodwa-ke, akufanele ulahle ithemba. Zama inhlanhla yakho bese uphonsa phansi wakho obuyekeziwe. Ngoba awusoze wazi lapho abaphathi bakwa-HR bengakunikeza ucingo olunenhlanhla no-Interview !.
Faka isicelo lapha nge-CV yakho
Imisebenzi ehhotela le-Dubai 7 Star
Isiphetho Ihhotela le-Dubai 7 Star
Isiko lama-Arabhu liyamangaza nje futhi ligcwele ukungenisa izihambi. Kubavakashi baseYurophu nabaseMelika ingahluka kakhulu. Kodwa-ke, le nkampani inezibuyekezo zezinkanyezi kuphela ze-5 futhi iningi labavakashi bayo nakanjani lizobuyela ukuvakashela leli Hhotela elimangalisayo.
Kunezinhlelo eziningi zeTV ukuthi leli hhotela lakhiwa kanjani nokuthi malini eliphelele. Ngokwazi kwethu le ndawo njengendawo enhle yokuhlala eDubai uma ungakwazi ukukhokhela amanani abo kuphela.
Ngiyethemba sikusize uthathe isinqumo sokuthatha uhambo lwakho lweholide uye eParlibe City yethu. Futhi ngokujwayelekile, uzokwazi ukubuya futhi uvakashele ingosi yethu.
IDubai City Company manje ihlinzeka ngemikhombandlela emihle yemisebenzi eDubai. Ithimba lethu lathatha isinqumo sokungeza imininingwane yolimi ngalunye I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje usungathola iziqondiso, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.